Burma Sweethearts, Online Dating for Singles in Myanmar - မြန်မာ ချစ်သူမျာBurma Sweethearts
Rules / Report Abuse
Rules / Report AbuseTipsProfile Search
Welcome to Burma Sweethearts, the newest online network to connect local singles in Myanmar and single foreigners abroad. Unlike other popular dating websites, you can createaprofile, browse singles in any location, send and receive messages, all for free. No membership fee, credit card or other payment information is required. Createanew profile now and search for singles in Myanmar and abroad instantly!
မြန်မာ ချစ်သူများ မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူပျို၊ အပျိုတွေနဲ့ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ လူပျို၊ အပျို နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဆက်သွယ်ပေးမယ့် နောက်ဆုံးပေါ် အွန်လိုင်း ကွန်ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား ချိန်းတွေ့တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေနဲ့ မတူတာကတော့ သင်က ပရိုဖိုင်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်တာ၊ ဘယ်နေရာမှာမဆို ရှိနေတဲ့ လူပျို၊ အပျိုတွေကို ရှာဖွေကြည့်ရှုတာ၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ အပြန်အလှန် ပေးပို့နိုင်တာတွေကို အခမဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အသင်းဝင်ကြေး မရှိသလို ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား ငွေကြေးအချက်အလက်တွေ ပေးဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ပရိုဖိုင်အသစ်တစ်ခု အခုပဲ ဖန်တီးလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ လူပျို၊ အပျိုတွေကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
Burma Sweethearts was launched in July of 2018 with the aim of creatinganon-exclusive, simple and friendly dating environment for local Burmese and expat singles, as well as foreigners abroad looking to connect with single people in Myanmar. By allowing for totally free access to createaprofile, search for other singles, send and receive messages, Burma Sweethearts has created an inclusive community not based on personal income or social status, but on equality and universal open-mindedness.
မန်မာ ချစ်သူများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သီးသန့်မဟုတ်တဲ့ ရိုးရှင်း ဖော်ရွေတဲ့ ချိန်းတွေ့စရာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပြည်တွင်းက မြန်မာလူမျိုးတွေ၊ ပြည်ပက လာရောက်အခြေချ နေထိုင်တဲ့ ပညာရှင် လူပျို၊ အပျိုတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံက လူပျို၊ အပျိုတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ရှာဖွေနေတဲ့ ပြည်ပက နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ဖန်တီးပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဖိုင် ဖန်တီးတာ၊ တခြား လူပျို၊ အပျိုတွေကို ရှာဖွေတာ၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ အပြန်အလှန် ပေးပို့တာတွေအတွက် လုံးဝ အခမဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ မြန်မာ ချစ်သူများကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဝင်ငွေ ဒါမှမဟုတ် လူမှုအဆင့်အတန်း တစ်ခု ပေါ် အခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတာ မဟုတ်ဘဲ တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံး ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်သဘောထားတို့အပေါ် အခြေခံထားကာ အားလုံးပါဝင်တဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးထားပါတယ်။
Burma Sweethearts © 2018